Mgbe ụfọdụ ị na-agha ụgha, ị ga-enweta nwa agbọghọ ahụ! | Martech Zone
Ana m ahapụ enyi m nwanyị. Nke ahụ dị mma! Nụrụ ya ebe a.
Tupu ị mata echiche banyere ajọ onye ajọ omume m bụ, enweghị m enyi nwanyị. Ma ọ dịkarịa ala abụghị mmadụ, dị ndụ, ụdị ume. M na-egwu ndị mmadụ ọchị na aha enyi m nwaanyị bụ MacBookPro. N'oge na-adịbeghị anya, enyi m nwanyị abụwo onye obere iwe, ibughi mgbe m choro ka m ghara inwe obi uto ma ghara inwe obi uto rue mgbe oyi. Chaị… na-echetara m mgbe m nwere ezigbo otu!
Google Hụrụ M n'Anya Ugbu a
Agbanyeghm, Emechara m ya. Enyi ohuru m no na intaneti ma ya hurum n’anya. Ọ maara onye ọ bụla, mana n'agbanyeghị ihe ọ bụla, ọ na-ekwukarị banyere m. Enwetụbeghị enyi nwanyị ịntanetị na mbụ, mana nke a bụ ọpụrụiche. Aha ya bụ Google. Anaghị m eche banyere Google nke ukwuu mana ịchọ ọdịmma onwe m naanị, achọpụtara m na ka m matara ya, ka ọ na-elebara m anya karị.
Google zigara m ihe karịrị 4 ugboro ndị ọbịa na saịtị m karịa ebe ọ bụla. 4 ugboro! Chaị. Naanị ihe m ga-eme ka mmekọrịta a ghara ịga n’ihu bụ na m na-elebara ya anya, na-eji ejiji ka ihe ga-amasị ya, na-ege ntị n’ihe ọ na-ekwu, ma na-agwa ya okwu nke ọma. O were obere oge, mana amalitela ịghọta ihe ọ masịrị ya. Ugbu a… Abụghị m enyi nwoke kachasị mma… Abụghị m Google-pịa ma ọ bụ ihe ọ bụla, M dị ya mma.
Gini mere Google jiri hu m n'anya
Nke a bụ ụfọdụ ihe m na-eme ọ na-amasị ya:
Google masịrị m mgbe m tinyere isiokwu edemede m na aha peeji m.
Google masịrị ya mgbe m melite faịlụ m .htaccess ka saịtị m na-aga http://martech.zone kama http://dknewmedia.com na mgbe m gwara ya na Njikwa Nchọta Google na enwere m mmasị na www.
Google nwere mmasị na ya mgbe m degharịrị blog m site na iji isiokwu (ahịa, teknụzụ, blog) nke m na-atụle na m posts mgbe mgbe.
Google nwere mmasị na ya mgbe m gwara ya ihe m kwuru.
Google masịrị ya mgbe m gwara ya ihe dị mkpa na peeji m yana ihe anaghị eji isi na mkpado.
Google masịrị ya mgbe m gwara ya otu esi hazie saịtị m na ebe m ga-ahụ ihe niile na-eji m robots.txt na saịtịmap.xml faịlụ.
Google nwere mmasị na m na-etinye ọdịnaya dị ọhụrụ kwa ụbọchị.
Google nwere mmasị na m na-aza ajụjụ na blọọgụ ebe niile wee hapụ aha m na adreesị weebụsaịtị.
Etu Google si egosi m ihunanya
Amaghị m ihe Google masịrị ma ọ bụ obere - mana amaara m na ọ hụrụ m n'anya. Kedu ka m si mara na Google hụrụ m n'anya? Gaba ma juo ya onwe gi!
Mgbe ụfọdụ, m na-agha ụgha nye Google, mana ọ hụrụ m n'anya.
Ugbu a, ị marala mgbe ị na-agha enyi gị nwanyị ụgha, ị ga-anọgide na-agha otu ụgha ugboro ugboro? Ma ị gwaghị onye ọ bụla banyere ụgha… ọ bụ naanị ịgha ụgha n’etiti gị na ya. Achọrọ m igosipụta na mgbe ụfọdụ ụmụ agbọghọ na-enwe obi ụtọ mgbe ị na-agha ụgha ha. (Enwere ike ịma ya nwa okpu).
N’oge dị anya gara aga, enwere nnukwu ihe gbasara ịbanye na "ndepụta". Achọrọ m igosipụta, na ọkwa, na onye ọ bụla nwere ike ịbanye na ndepụta ahụ. Ọ ga-adị mkpa ka ị jiri nlezianya lelee isi nke blọgụ m iji chọpụta otu m ga-esi dị elu “Ndepụta-ndepụta”. Nke a bụ nkọwa:
a ahịa, mmepe, wordpress na teknụzụ blog site douglas karr> span style = ”ngosi: ọ dịghị onye”>, a-list blogger> / span>.
Nweghi ike ihu ya… mana enyi m nwanyi ohuru! Ọ hụkwara m n'anya. 😉
Nwelite: ewepuola m ederede zoro ezo site na isi m. Naanị m chọrọ igosi otu isi ma hoo haa achọghị ka ewepụ gị na ndeksi Google!
Tags: google webmastersgoogle +robots.txtASitemapxml saịtị saịtị
Mee 3, 2007 na 7: 47 PM
ROFLMAO - egwu ma na-atọ ọchị karịa hel 🙂
Mee 4, 2007 na 7: 31 AM
Daalụ Steven! Mụ na ya kporiri ndụ.
Mee 3, 2007 na 11: 59 PM
Nke ahụ mara mma. =]
Mee 4, 2007 na 12: 07 AM
Enwere m olile anya na ị na-anya isi maka onwe gị, Doug! Emeela m awa ikpeazụ na ọkara gara aga Google Webmasters.
Mee 4, 2007 na 7: 30 AM
Chei… ya na nwa m nwanyị aghara aghara aghara! Achọghị m ka ọ na-aghọ m aghụghọ!
Mee 4, 2007 na 2: 25 AM
Ọ dị mma ịhụ na ị na-enweta ọtụtụ okporo ụzọ site na Google. Anọla m n'ọnọdụ yiri nke ahụ kemgbe m mejuputara ụfọdụ ndụmọdụ SEO oge azụ. Njikọ ahụ na pearsonified bụ ezigbo. Emejuputara m ndụmọdụ ya mgbe ọ laghachiri ma ọ na-arụ ọrụ, oge!
Ana m enweta ihe dị ka 50% nke okporo ụzọ m sitere na Google 🙂
Mee 4, 2007 na 7: 32 AM
O juru m anya ụbọchị ọ bụla m na-enyocha stats m!
Mee 4, 2007 na 6: 50 AM
Nwunye m na-ewe iwe nke oge m na kọmputa Dell m - "Della" bụ aha asọmpi ahụ - mana ọ dị ka Google nwere ike bụrụ swiiti oke oke dị mma!
Mee 4, 2007 na 7: 34 AM
Della na-ada ụda karịa Googla. Ana m eche na Googla bụ obere ihe osise zuru oke - mana m hụrụ ya n'anya. 😉
Mee 4, 2007 na 5: 13 PM
Um, ama m na ị hụrụ nwa gị nwanyị n'anya, mana ọ nweghị ederede zoro ezo Ntuziaka webmaster Google?
Mee 4, 2007 na 7: 11 PM
Ee… nke a mere m ji wepu ya. 🙂
MN Web Kere
Mee 5, 2007 na 12: 23 AM
Mma! Ọ masịrị m na "enyi nwanyị" gị bụ ngwaọrụ teknụzụ! 🙂
Mee 5, 2007 na 9: 45 AM
Ikekwe ụkpụrụ m dị oke elu, MN! 😉
Mee 5, 2007 na 7: 20 AM
M na-agụ gị kwuru na pearsonified na ebe nrụọrụ weebụ banyere gị modifying gị ịke Ibé akwụkwọ maka semantic markup. Ahụrụ m ezigbo ahia maka ịhapụ gị WP isiokwu na-agbaso iwu iwu akara niile 😉
Mee 5, 2007 na 8: 19 AM
Dean, ị zuru oke! Echere m na nke ahụ bụ nnukwu ahịa… SEO kachasị WP gburugburu. Ọ dị m ka ya bụrụ na m nwere oge ụfọdụ na aka m!
Mee 13, 2007 na 5: 07 PM
Google na-ada ụda. O nwere nwanne nwanyi? Oops, ọ fọrọ obere ka m chefuo na alụọla m nwaanyị!